चीनद्वारा भारतियमाथि रकेट आक्रमण नगरेको स्पष्ट :: a1nepal.com.np
चीनद्वारा भारतियमाथि रकेट आक्रमण नगरेको स्पष्ट
पाकिस्तानी टिभी च्यानलले समाचार झुट सावित
पाकिस्तानी च्यानलले पोस्ट गरेको झूट तस्वीर, चिनिया हमलामा १५८ भारतीय सैनिक मारिय (फोटोः दुनिया न्यूज)
भारत र चीनविच जारी सीमा विवाद र डोकलाम विवादको विषयलाई लिएर तनाब चलिरहेकै बेला चिनियाँ मिडियाहरुले अत्यन्तै खराव परिणाम व्यहोर्नुपर्ने घम्की दिइरहेका छन् भने भारतले आफ्नो अडान कायम राख्दै कुनै अवस्थामा पनि पछि नहट्ने बताइरहेकै बेला एक पाकिस्तानी मिडियाले चीनले भारतमाथि रकेट आक्रमण गरेको समाचार प्रसारण गरेको छ ।
पाकिस्तानी टिभी च्यानल दुनिया न्यूजले चीनियाँ सेनाले गरेको रकेट आक्रमणमा १५८ भारतिय सैनिक मारिएको दावी गरेको छ । गत सोमवार भएको आक्रमणमा यस वाहेक अन्य कैयन सैनिकहरु घायल भएको बताएको छ । पाकिस्तानी टेलिभिजन च्यानलको उक्त हरकतको पर्दाफास त्यतिवेला मात्र भयो जव उक्त टिभी च्यानलले आफ्नो आधिकारिक वेब साइटमा आक्रमणको भन्दै केही तस्विरहरु समेत पोस्ट गर्यो । तर भारतिय सैनिक निर्देशनालयले उक्त तस्विरहरु झुटो भएको स्पष्ट पार्दै आक्रमण नभएको दोवी गरेको छ ।
पाकिस्तानी टिभी च्यानलले सिक्किम मुद्दामा भारत र चीनविच झडप शुरु भएको दावी गरेको छ । त्यस लगत्तै चीनले भारतिय सैनिकमाथि रकेट हमला गर्यो जसमा भारतिय सैनिकका १५८ जवान मारिए भने दर्जनौ अन्य जवान घायल भएका छन् । उक्त टेलिभिजिनका अनुसार यस अघि पनि यी दुई देशविच झडप हुदै आइरहेको छ । सो टेलिभिजनले विवादको शुरुवात भारतको तर्फबाट भएको थियो, त्यसैको कारवाही स्वरुप चीनले भारतिय सैनिकमाथि रकेट आक्रमण गरेको हो ।
दुनियाँ न्यूजले प्रसारण गरेको झुट रिपोर्ट :
अमेरिकी सैनिक नै आईएस समर्थक, तालिमसमेत दिने गरेको खुलासा किन भए भारतीय र चिनियाँ सेना आमने–सामने ? छत्तिसगढमा माओवादीद्वारा भीषण हमला, २६ प्रहरी मारिए, ६ बेपत्ता राष्ट्रपतिको मृत्युबारे भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिष प्रहरीको फन्दामा अमेरिकाको ४५औं राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रम्प आईएस प्रमुख बग्दादीको हत्या प्रयास भारतद्वारा पाकिस्तानको सीमाक्षेत्रमा गोलाबारी, दुई सैनिक मारिए, नौजना घाइते यस बर्षको प्रतिष्ठित ओस्कार अवार्ड चर्चित फिल्म स्टार ज्याकी चयनलाई डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टीबाट आधिकारिक उम्मेदवार घोषित करोडौं प्रशंसक मेसीको जवाफको प्रतिक्षामा
← नेपाल मगर संघ इजरायलको चौथो वार्षिकोत्सव तथा दोश्रो अधिवेशन सम्पन्न	चर्चित लोकगायक बद्री पंगेनी पक्राउ, २ लाख बरामद →
राष्ट्रिय तामाङ घेदुङ इजरायलको अध्यक्षमा बिमला मोक्तान चयन
दशगजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले कष्टम चेकपोष्टको कार्यालय बनाउन खोज्दा, सशस्त्र प्रहरीले गरे विरोध
इजरायलमा नेपालीले गरे अकबरे खुर्सानीको खेती
अर्जेन्टिना र इजरायलबीचकाे मैत्रीपूर्ण खेल रद्ध
बालगृहका बालबालिकाको सिरानीमुनि बाइबल !
दुई बालबालिकालाई कल्पना फाउन्डेसनले पढाउदै
गाजामा प्रदर्शनकारीमाथिको इजरायलको सैन्य कारबाहीमा ५९ मारिए